Diôsezin'Ambositra - Wikipedia
Mampalaza ny faritr'Ambositra ny finoana katôlika. Na aiza na aiza eran-tany dia misy relijiozy na pretra zanaky ny Diôsezy avokoa.
Manana ny tantarany koa ny fivoaran’ny finoana katôlika ao amin’ny Diôsezy Ambositra. Azo tombanana raha tafapàka amin’ny ankamaroan’ny olona ny Vaovao Mahafaly araka ny tondro izay aroso eo ambany. Tonga nitondra ny Vaovao Mahafaly ireo misionera tonga voalohany, nasehon’izy ireo tamin’ny fiainany sy ny fahafoizan-tenany ny maha Lalana sy Fahamarinana sy Fiainana an’i Kristy. Nahasarika olona maro handray ny finoana izany ka nitohy tsy nitsahatra isan-taona ny fanaovana batemy. Marina fa ny misterin’ny fanavotana sy ny famonjena nataon’Andriamanitra ary ny fiainana omeny izay mino Azy ho an’ny olombelona no torîna hatraiza hatraiza, kanefa mitàna anjara toerana lehibe amin’ny asa fampielezana ny finoana ny fiheveran-ko zavatra ireo zava-misy sy ny toe-piainan’ny olona eo amin’ny faritra ampidirana ny Evanjely.
Na dia samy irahina hitory ny Evanjely aza ny mpianatr’i Kristy ka samy mandeha eran’izao tontolo izao ho iraka mpitory Vaovao Mahafaly, mitondra hafatra iray: i Jesoa Kristy sy ny famonjena, dia mety hiova arakaraky ny fotoana sy ny faritra, ny kolontsaina ary ny karazan’olona vantanina ny fomba fampitàna ny Evanjely. Miainga amin’ireo tondro ireo no mety mampiova ny laharam-pahamehana sy ny safidy pastôraly isaky ny Diôsezy, eny fa na amin’ireo izay mifanolotra sisintany aza.
Topimaso ara-tantara: Daty manan-danjaModifier
15 Aogositra 1873: lamesa voalohany tao Amoron’I Mania (Sandrandahy), notarihin’I P. Delbosc, SI. Ny taona 1876: lamesa voalohany natao tao Ambositra. Tamin’ny 1886-1891 dia nankinina tamin’i P. Jacques Berthieu ny fandrindrana ny Misiona eran’ny faritra Ambositra. Tamin’io izy no nitondra manokana (Curé) tao Ambositra. Ary ny 1891 dia voatendry hifindra hiala an’Ambositra I P. Jacques Berthieu. Nahatsangana fiangonana miisa 15 izy tamin’izany. Nitambatra tamin’ny Diôsezin’i Fianarantsoa ihany Ambositra ny 14 septambra 1955 – 3 Jona 1999. Ny 3 Jona 1999 izao no teraka ho Diôsezy Ambositra.
Mômpera Fulgence Rabemahafaly no voatendry ho Eveka hitantana azy voalohany. Nohamasinina tamin’ny 31 Oktôbra 1999 izy. Eveka faharoa sady mitondra ny Eglizin’Ambositra anekhitriny, Mgr Fidélis Rakotonarivo, Zezoita, nanomboka ny taona 2005. Ankehitriny dia misyparoasy roa eo an-drenivohitra ary distrika 19 ambanivohitra. Ireto misy tondro vitsivitsy. Ny isan’ny fiangonana rehetra dia mitontaly 542. Ny pretra miasa mivantana ao amin’ny diôsezy dia miisa 49. Ny isan’ny mponina rehetra ao amin’ny faritanin’ny diôsezy dia 844 792. Amin’io ny Katôlika dia ny 421 860. Ireo mandray ny eokaristia: 243 664. Ireo tena mpamonjy fiangonana alahady dia 164 743. Ny pretran’ny diôsezy ankehitriny dia efa miisa 72.
Ezaka tratrarin’ny Diôsezy ny fandinihana ny Soratra Masina, satria ao no ananana ny fiainana mandrakizay sy manambara indrindra an’i Kristy. Eo koa ny ady amin’ny habadoana izay vavahady manokatra ho amin’ny fisokafana sy ny fandrosoana ary ny fivelarana. Manampy ireo ny fikajiana ny tontolo iainana. Fa efa hatramin’ny ela no miara-mientana ny rehetra hanamasina ny ankohonana sy ny fianakaviana. Azo tombanana ho vokatr’izany ny firoboroboan’ny fiantsoan’Andriamanitra ato amin’ny diôsezy. Tsy isalasalana ny anambarana fa sompitry ny famaliana ny antso ho amin’ny fanokanan-tena ny Diôsezy Ambositra.
Manampy ny pastôraly mivantana sahanin’ny pretra any amin’ny sehatr’asa fampielezana ny finoana ikatrohany tsirairay avy any, ny ezaka lehibe fitoriana ny Evanjely amin’ny alalan’ny www.radiomaria.mg. Ity onjampeo ity manko dia mifantoka be dia be amin’ny fanabeazam-pinoana sy ny fampisondrotana ny maha olona. Isan’ny irosoana koa ankehitriny ny fizaram-paritra satria maro ireo distrika midadasika sy be olona kanefa vitsy ny pretra misahana azy. Misy koa ny fandaminana vaovao amin’ny fomba itondrana ny distrika sasany.
Zarina efa hahaleo tena tsikelikely ny faritra sasany tokony ho lasa distrika mahaleo tena any aoriana. Nanao ny FI.FI.VA (Filankevitra momba ny Fitantanana ny Vahoakan’ Andriamanitra) ny diôsezy tamin’ny volana Nôvambra lasa teo. Teny nanentana ho teny baiko manosika hiasa tato amin’ny diôsezy ny hoe: “Ndeha antsoy ny Tompo fa lasa isika”. Teo koa ny hoe “Mifanabe dia miara-mivoatra”. Niainana ary mbola iainana ny hoe ‘Ndao handeha amin’ny fitiavana tahaka an’i Kristy, na dia nisafidy teny faneva vaovao aza: “Mirosoa amin’ny lalina”.
Manana gazety manokana ifandraisana ny diosezy, dia ny Gazety Akon'ny Diôsezy Ambositra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Diôsezin%27Ambositra&oldid=997402"
Dernière modification le 22 Septambra 2020, à 11:15
Voaova farany tamin'ny 22 Septambra 2020 amin'ny 11:15 ity pejy ity.